Soosaarka Shiinaha iyo Warshadaha Shiinaha Yongguang
Qalabka Khadka Korantada
Isugeynta Xargaha Sare
Insulator iyo Fuse Cutout
Insulator ka kooban
Qabashada Qaliinka Surge
Xabadu waa aalad guud oo loogu talagalay korantada iyo nidaamka khadka gudbinta. Waxay leeyihiin noocyo badan oo kala jaad ah, sida korantada mashiinka loo yaqaan 'trans Transcket bracket', fariisinka korantada, garabka baloogiyaha, xarkaha xiraha, garabka dib u soo celinta, garabka sare, googooyaha gooyaha, garabka adeega dhinta iyo baandada boosta. waxaan awoodnaa sida waafaqsan shuruudaha macmiisha si aan u habaynno.
Qalabka-Jirka Birta, bir-aanta lahayn, maar
Dhameystirka Dip Galvanize kulul
Sharaxaadda ciriiriga isku haynta: waxaa jira labo nidaam oo ciriiri gareeya, 1. Xirmooyin isku dheelitiran, sida nooca xirmo xiisad kicinta isku xirnaanta ah, xawaare sare, nooca xiisada murugsan, mar dambe ayaa la hagaajin karaa. 2. Xirmooyinka aan la-adeegsan karin, sida isku-xidhka isku-xidhka isku-xidhka ee u baahan in la is-waafajiyo dhererka siligga gabi ahaanba. Noocyada ciriiriga isku xidhka ayaa ah ll -1, ll -2, ll -3, ll -4, iwm.
Khibradaheena balaaran ee duulimaadkaan, waxaan awoodnaa inaan soo saarno oo aan soo bandhigno qalab tayo leh oo tayo sare leh. Qaybahaas waxaa loo isticmaalay in lagu dhiso ulaha waaweyn iyo dhagaxyada. Badeecadeenu waxay ka kooban yihiin qalab tayo sare leh oo waara. Qalabka la habeeyay si taxaddar leh ayaa loo hubiyaa ka dib nidaamka wax soo saarka si loo hubiyo in dabeecadda aan loo dulqaadan karin. Intaas waxaa sii dheer, tas-hiilaadkayaga ballaaran ee gaadiidku waxay noo suurtogeliyaan inaan gaarsiino khadadka safarka ee tiirarka waqtiga cayiman.
Baaxaddayadu waxa ka mid ah
Xarkaha muraayadaha lagu hagaajin karo
Caano (il qabad)
Xarig dheji (toosan / wareeran)
Caano (laba indhood)
Cuntada indhaha ee Oval
Xirmooyinka birta ah kahor intaanu sallim
Hayaha xayeysiinta ku dheji
Xargaha tareenka (laba fiilooyin)
Indho dhibic isha ha
D taageero birta ah
Xalka labaad (saddex fiilooyin)
Cunidda isha cagaarka ah
D taageerada birta (pin, pin)
Qeybta / guddiga galka
Waxaan had iyo jeer si taxaddar leh u bixinnaa tayada badeecadeenna. Dhammaan waxyaabaha xanibaadda ah waxay hoos imaanayaan 100% IEC ama heerarka ANSI. Waxaan dammaanad ka qaadeynaa in heerka u qalma ee badeecada inta aysan bixin ay 100% yihiin. Alaabada loo dhoofiyo Mareykanka, Boqortooyada Midowday, Fiyatnaam, Talyaani, Ruushka, Griiga, Argentina, Chile iyo dalal kale iyo gobollada. Si loo hubiyo tayada badeecada, shirkaddu waxay ka gudubtay iso9001: 2008 caddaynta nidaamka maaraynta tayada, macaamiisha gudaha iyo dibaddaba inay ku guuleystaan ​​sumcad wanaagsan.
Habdhaqanka adeegga wanaagsan, waqtiga jawaabta deg degga ah, gaarsiinta waqtiga, mas'uuliyada iyo dabacsanaanta waa waxa aan ku dhaqmeynay bilowgii. Qiimaha tartanka, tayada wanaagsan iyo waqtiga la soo bixitaanka. Dhammaan arrimahan annaga ayaa na siinay. Waxaan rajeyneynaa inaad xiiseyneyso badeecadeena isla markaana si diiran u soo dhaweyneyno inaad nagala shaqeyso faa iidada labada dhinac ah.
Hore: Ball Eye
Xiga: Clevis Nut
Alaabada la xidhiidha
Eeg alaabo dheeri ah >
Godka daray biire
Faahfaahinta: Xarig, waa shey U-qaabeysan bir ah oo lagu keydiyey biin go'an ama guntin albaabka ka soo gala, ama bir bir ah oo xirxiran oo lagu xiray qalab si dhakhso leh u sii daayo. Burburku waa iskuxirka ugu weyn ee isku xirka dhammaan noocyada nidaamyada xayiraadda, laga soo bilaabo doomaha iyo maraakiibta ilaa xirmooyinka marada warshadaha, maadaama ay u oggol yihiin xirmo kala jaad jaad ah in si dhakhso leh loogu xiro ama looga xiro. Waxaan haynaa noocyo badan oo isku shaandheyn ah, waxaan sidoo kale u sameyneynaa macaamiisheenna inay buuxiyaan shuruudahooda. Guud ...
Isgoyska Shahe iyo Dongguajing Tuulada, Liuying County, Degmada Yongnian, Hadan City, Hebei, Shiinaha
Alaabada la soo Bandhigay - Khariidadda - Bogga Moobiilka